Sujet Malagasy – série A, session 2006 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar - Sujets et corrigés du baccalauréat 2020 à Madagascar
Sujets et corrigés du baccalauréat 2020 à Madagascar Malagasy Série A Sujet Malagasy – série A, session 2006 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar
Sujet Malagasy – série A, session 2006 : Baccalauréat de l’enseignement général Madagascar
1. Milaza eva na dondo telo (03) nentin’ny Malagasy naneho ny aina.
2. Manomeza tara-kevitra telo (03) iombonan’ny asa soratr’ireto ireto:
J.J. Rabearivelo, Samuel Ratany, Jasmina Ratsimiseta.
Hoy ny mpandinika iray:
“Lalana iray ahatongavan’ny tsirairay sy ny fiaraha-monina amin’ny atao hoe tonga lafatra ny finoana ny fisian’ny tsiny sy ny tody”. Fakafakao sy tsikerao izany fiheverana izany.
(…) Ka ny tena mpanoratra, ny tena poeta, dia ilay mahay mandresy lahatra ny mpamaky, ilay mamony ny tenany, ilay mpamalifaly, manohina anao hangoraka, halahelo, ilay misarika anao ho tia, mety hanosika anao hankahala, ilay mahatonga anao hankasitraka, dia ilay mpandrindra ny fihetsem-ponao hiankavia na hiankavanana.
Ny aingam-panahy no karazana tromba mambambo ny fon’ny poet aka mahatonga azy hiteny kanto, hanoratra ny meva, hambabo fo hafa. Manampy izany indrindra ny fivelaran-tsaina, ny herin’ny fieretseretana, ny asan’ny fanahy, ireo rehetra ireo mitambatra no tonga hery famoronana, ka antsoina hoe talenta.
Manatevina izany rehetra izany ny tetika sy paika enti-mandrindra ny asa, izay mahatonga ny fitenenana fa ny poeta dia mpandrindra. Ka ny feo sy ny teny no arafiny ho tonga sora-kanto. Ary ny soratra avoakany amin’izany dia maneho fa ny mpanoratra, ny poeta dia havanana sy kinga amin’ny fampiasana teny sy soratra: ahodiny hanana endrika miavaka ireny ka miteraka fihetseham-po miavaka koa.
Ny soratra no ahalalana fa ny nofinofy, ny fahitana mbamin’ny tsindrimandry iainan’ny mpanoratra no avoakany. Tsy izany ihany fa ao ny fanomezana dikany ny fiainana, ny fanazavana ny fitrangan-javatra ao amin’ny fiaraha-monina. Ary mbola maneho amin’ny alalan’ny teny risi-po sy ny fahadisoam-panantenana koa izy.
RAKOMAHAFALY Norbert Eugene (Madagascar-tribune, no 028, 17 Janvier 1989)
Mamony: mampionona, mampitony.